Fanalàna Baràka Noho Ny Toe-batana Tao Amin’ny Parlemantan’i Pakistana: ‘Misia Mampikombona Ny Vavan’io Traktera Tarihina ìo’ · Global Voices teny Malagasy
Fanalàna Baràka Noho Ny Toe-batana Tao Amin'ny Parlemantan'i Pakistana: ‘Misia Mampikombona Ny Vavan'io Traktera Tarihina ìo’
Voadika ny 09 Jona 2016 16:36 GMT
Parlemantan'i Pakistana, Islamabad. Sary avy amin'ny Wikimedia Commons.
Iharan'ny kina mivaivay avy amin'ny mpanao lalàna avy amin'ny mpanohitra ireo Pakistane tsotra ny Ministry ny Fiarovana ao Pakistana, Khawaja Asif, dia ireo izay mieritreritra fa diso toerana sy manambany ny tsy mitovy fananahana aminy ireo fanamarihana vao haingana nataony tamin'ilay Mpikamban'ny Parlemanta, Shireen Mazari, tamin'ny fivorian'ny parlemanta.
Ao anatin'ny antoko eo amin'ny fitondràna, Ligin'ny Silamo Pakistane Nawaz (PMLN), i Asif, izay mitazona toerana hafa koa amin'ny maha minisitry ny rano sy ny herinaratra azy, raha mpikambana amin'ny mpanohitra Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) kosa i Mazari. Miezaka manampim-bava an'i Mazari amin'ny fanoherany ny fahatapahan-jiro nandritra ny volan'ny fivavahana Ramadany, nilaza izao i Asif, “Misia olona mampangina io traktera tarihana io,” mba hanaovana izay hahamenatra azy noho ny toebatany. Nilaza izao ihany koa izy, “Ataovy mba vavivavy kokoa ny feon'io.”
Mpikambana amin'ny Antenimieram-Pirenena, Shireen Mazari. Dikasary avy tamin'ny 92newshd.tv
Tao amin'ny media sosialy, nanameloka ireo teny tsy amim-piheverana nataony ireo Pakistane. Nampiasa ny pejy Facebook-ny ilay mpanao gazety ela nihetezana, Hamid Mir, mba hiampangàna ireo fanehoankevitra ary nangataka fialantsiny:
Tena tsy azo ekena mihitsy! Manameloka mafy ny fitondrantenan'i Khwaja Asif nanoloana ilay vehivavy iray parlemantera ! Tena mampalahelo tokoa.
Nieritreritra ilay mpikatroka mafana fo ara-tsosialy, Khurshid Bano, fa nifanaraka amin'ny lehilahy manana olana amin'ireo vehivavy manana fahefàna ny fitondrantenan'i Asif:
Khwaja Asif's comments against Sherin Mazari are highly deplorable. Such comments show the treatment of men with women even in high position
— khurshid bano (@khurshidbano22) June 8, 2016
Tena mampahonena tokoa ireo fanehoankevitr'i Khwaja Asif tamin'i Sherin Mazari. Mampiseho ny fitondràn'ireo lehilahy ny vehivavy, na eo amin'ny toerana ambony aza , ny fanehoankevitra toy izany
Ireo sasany nitaky ny hanalàna an'i Asif ao amin'ny Parlemanta satria mahatsapa izy ireo fa tsy mendrika ny ho ao amin'ny Parlemanta mihitsy izy:
The people of NA110 must be ashamed of Khwaja Asif representing them in NA. Such a shame
— Changez Khan (@drchangezkhan) June 8, 2016
Tokony ho menatra ny amin'ny hisoloan'i Khwaja Asif ny tenan'izy ireo amin'ny Antenimieram-Pirenena ireo vahoakan'ny NA110. Mahamenatra
Voters of #KhwajaAsif must understand how much he pay respect to their women f he has such negative approach for a MP @ShireenMazari1 #Islam
— Naveed Hassan Lak (@naveed_lak) June 8, 2016
Tokony ho tonga saina ireo mpifidy an'i #KhwajaAsif hoe hatraiza ny fanajàny ny vehivavin-dry zareo raha manana toetra ratsy toy izany izy manoloana PArlemantera iray @ShireenMazari1 #Islam
how such ill mannered people can be allowed in assembly #KhwajaAsif just don't deserve any place in assembly #بےشرم_چوہا_خواجہ_آصف
— aqsa abbasi (@aqsaabbasi4) June 8, 2016
Ahoana aza no afaka mankao amin'ny antenimiera ny olona manana toetra adala toy izany. Tsy mendrika ny hanana toerana ao amin'ny antenimiera tsotra izao i #KhwajaAsif #بےشرم_چوہا_خواجہ_آصف
‘Tsy fahampiam-pahaizana ara-pihetsehampo mihitsy”
Nitatitra ny media fa tsy nahita ambara i Mazari taorian'ireo fanehoankevitr'i Asif, izay nolazainy tao amin'ny bitsika iray fa tsy marina:
News on TV channels that I broke down in NA bec of Kh Atif's remarks absolutely incorrect! We had a yelling match till Speaker intervened!
— Shireen Mazari (@ShireenMazari1) June 8, 2016
Tena tsy marina ireo vaovaon'ireo fandaharan'ny fahitalavitra nilaza fa tsy nahita ambara aho tao amin'ny Antenimieram-Pirenena noho ireo fanehoankevitry Kh Atif! Nifanasa vangy mafy izahay mandra-piditry ny Filoha nanelanelana!
Vitsy an'isa ireo vehivavy ao amin'ny Antenimieram-Pirenena, ny mpanao lalàna ao amin'ny Parlemanta. Natokan'ny lalàna ho an'ireo vehivavy ny seza miisa 60 amin'ireo 342, ary mihazakazaka ho amin'ireo sezan'ny solombavambahoaka ireo ny vehivavy, mifaninana amin'ireo namany lehilahy.
Na eo aza ny havitsiana, nitazona toerana ambony ireo vehivavy, tafiditra amin'izany ny filohan'ny antenimiera sy ny praiminisitra; teo anoloan'ireo hetsika ara-tsosialy tao Pakistana ihany koa ireo vehivavy, indrindra ny ady ho an'ny demokrasia, ary nitaky ny mba hampitomboana ny solotena amin'ireo samoan-draharaha eo an-toerana sy ny parlemanta.
Tato anatin'ny folo taona lasa, niasa taminà tolo-dalàna am-polony ireo vehivavin'ny Parlemanta, mba ho arovan'ny lalàna ireo vehivavy, ireo vitsy an'isa ary ireo ankizy. Araka ny tatitry ny fanarahamaso nataon'ny Tambajotran'ny Fifidianana Malalaka sy Tsy Mitanila (FAFEN), betsaka kokoa ny fandraisana anjaran'ny vehivavy parlemantera raha oharina amin'ny fandraisan'ny lehilahy anjara tamin'ireo fivoriana mikasika ny tetibola, 64 isan-jato ny fandraisana anjaran'ireo vehivavy raha 49 isan-jato kosa ny an'ireo lehilahy parlemantera.
Minisitry ny Fiarovana, Rano ary ny Herinaratra, Khawaja Asif. Sarin'ny Global Panorama, Wikimedia Commons
Maro ireo niarahaba an'i Mazari tamin'ny fijoroany nanoloana ilay fanomezana henatra azy noho ny toebatany sy ny tsy fitiavana ny tsy mitovy fananahana amin'ny tena. Noho ny nanaovan'i Asif ireo fanehoankevitra tao amin'ny efitry ny parlemanta no tena antony nahatonga ny ampahany be tamin'ny hatezerana. Na teo aza ny fampitandremana nataon'ny filohan'ny fivoriana, tsy niala tsiny tamin'i Mazari mivantana tao amin'ny antenimiera i Asif. Ny ampitson'io, nataon'i Asif hoe ‘mpitabataba’ indray izy, tamin'ny fialantsininy an-tsoratra ho an'ny Parlemanta.
Tamin'ny lahatsoratra tao amin'ny Facebook, nofintinin'ny mpisera amin'ny Aterineto, Mariam Sid, ho paikady fandemena saina ireo fihetsik'i Asif:
Ny malemy indrindra amin'ny malemy; ireo tsy mahalala ny dikan'ny hoe nandalo fianarana sy faharanitantsaina…ireo matetika no manao fanompàna sy fiteny manafintohina. Manaporofo ny tsy fahaizany na inona na inona izany, ary tsy fisiana fahaizana tanteraka maneho ny fihetsehampo. Amin'ny fiteny hafa, mandefa endrika ahafantarana ny tsy fahombiazana tanteraka amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainany izy ireo. Fiainany manokana sy ny arakasa.
Annexe A: manao ny paikady fandemena saina fampiasa tany an-tokotanin-tsekoly i Kh.Asif amin'ny fiantsoana ilay vehivavy mpanao politika hoe “traktera tarihina”.
Raha jerena ny hatezeram-bahoaka, toa hita ho tsy vonona ny hanampi-maso amin'io “mpampitahotra” io ireo tovovavy sy tovolahy ao Pakistana
21 Jolay 2014Azia Atsimo
Malaza Noho i Messi Ity Tovovavy Mpilalao Football Ity Any Amin'ny Tanàna Kely Lavitra Andriana Misy Azy ao Nepal